နေစမ်းပါအုံး၊ ဇိုယာဖန်တုံးက ငြိမ်နေတဲ့ ဧရာဝတီဝက်ဆိုက်တွေ၊ ကပ်ခွာ လွှဏ်းဆွေဝက်ဆိုက်တွေ အခုပင့်နေကြတာ ဘာသဘောလည်း၊ သူက မွတ်မလေးမို့လား၊ ဒါမှမဟုတ် မူဆလိမ်အလှူငွေတွေ ရလို့များလား။ နေစမ်းပါအုံး၊ ၈၈၈၈ တုန်းကငါတို့လည်း ကျောင်းသားတွေပါ။ မြအေးကဘယ်တုန်းက ငါတို့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သွားလဲ၊ မြအေးကို မင်းတို့ဘလော့တွေမှာ ဘဲစကြားဘူးတာ၊ မင်းတို့ဘဲခေါင်းဆောင်ဆိုပြီး လုပ်လိုက်တာမကြာသေးဘူးလေ၊ ၈၈၈၈တုန်းက ကျောင်းသားဖြစ်ခဲ့တဲ့ ကောင်တွေရေ၊ မြအေးမင်းတို့ ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ခဲ့တာ၊ ရှိတဲ့သူတွေ တဦးတယောက်လောက်ရှိခဲ့ရင် ငါဆီကိုအကြောင်းကြား ပေး( sirthein@gmail) အုံးနော်၊ ငါယုံလိုက်ချင်လို့ပါ။ ဝေနှင်းပွင့်သုန် (မြန်မာနာမည်လားဟင်၊ ရင်နာလိုက်တာ) ပြောတဲ့ အင်္ဂလိပ်စာဟာ အင်္ဂလန်အက်စင့်လား၊ အရမ်းဘဲ ပီတာဘဲလား၊ ဒါဆိုငါတို့တွေ့နေ၊ ကြားနေရတဲ့ အင်္ဂလန်ကအဖြူကောင်တွေဆိုတာ နူနေတဲ့ဘိုတု တွေဖြစ်နေပြီထင်တယ်။
နေစမ်းပါအုံး။ အနှစ်၂၀ လောက်နိုင်ငံရေးနဲ့ ဘ၀စွန့်လုပ် နေသူတွေရယ်၊ မျိုးဆက်သစ် နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင် ပေါ်ပြီလို့ မူဆလိမ်တွေ၊ ဒီမိုငတုံးတွေ၊ မူဆလိမ်နောက်ဆွဲတွေ အော်နေကြပြီ။ မင်းတို့တွေနောက်ထပ်နှစ်၂၀ ထပ်လုပ် လိုက်အုံး၊ ဝေနှင်းသုန်လေး (ခေါ်ရတာရင်နာတယ်) အနှစ်၂၀ နားလိုက်အုံးမယ်၊ ပြီးမှခုထက် ၅ မိနစ်ပိုပြီး ၁၀ မိနစ် ပြောလိုက်မယ်။
လွှဏ်းဆွေဆိုတဲ့ ခွေးသတောင်းစားရယ်။ ဒီကွန်မင့်လေးတွေ့ရင် မင်းလုပ်နေကျတိုင်း မူဆလိမ် ဆန့်ကျင်တယ်ဆိုပြီး ဖျက်လိုက်အုံး၊ ဒီမိုလုပ်သူတွေကို တိုက်ခိုက် ဆွပေးတဲ့ မေးလ်ကရတယ်ဆိုဆိုနေတဲ့ မင်းရဲ့စာတွေနဲ့ မင်းရဲ့စီဘောက်ကနေ ဝေစုမရလို့ ဒီမိုတွေကိုအပုတ်ချရေး နေတာတွေနဲ့ မှားဖျက်မိအုံးမယ်၊ သတိထားလိုက်အုံး။
အင်္ဂလိပ်စာဆို ရက်၊ နိုးလောက်ပြောတဲ့ မူဆလိမ်နောက်ဆွဲတွေရယ် နိုင်ငံခြားမှာ နေရင်နားမျက်စိလေးဖွင့်ထားအုံး။ အိန္ဒိယကုလားကို ဘိုထင်ပြီး ယူလိုက်တဲ့မြန်မာမနဲ့၊ အာရပ်ကုလားကို ဘိုနဲ့မှားပြီး ပုံအပ်ပြီးမှ၊ အာရပ်ကုလားအပြေး၊ မြန်မာလောကမှာ နာမည်ပွလို့၊ နှပ်ပြီးပြေးတဲ့ ဘိုတုကို စိတ်မနာဘဲ နာမည်ပွသွားလို့ မြန်မာဆိုစိတ်နာတဲ့ မြန်မာမတွေတွေ့နေရတယ်။
ဝေနှင်းပွင့်သုန် (ခေါ်ရတာရင်နာတယ်) နဲ့ အင်္ဂလန်မူဆလိမ်အသင်းကြီးရဲ့ ယူကျူမှာ တင်ထားတဲ့ ဗွီဒီယိုကလစ်များကို တစုတစည်းကြည့်ပြီးမူဆလိမ်များရဲ့နိုင်ငံရေး ရည်မှန်းချက်တွေကို နာလည်နိုင်ကြပါစေ
အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် တင်ပေးတာ နောက်ကြသွားတာကို တောင်းပန်ပါတယ်။
Posted by ★သခင်မျိုးဟေ့ဒို့မြန်မာ★ at 5:22 AM
ဒိန်းမတ် က မွတ်ဆလင် ဆို သိပ်စိတ်ပျက်တာ.. သူတို့ရဲ့ ကာတွန်းဆရာတစ်ယောက် မုဒိန်းမိုဟာမက် ပုံ ဆွဲလို့ တစ်ကမ္ဘာလုံးက မွတ်စလင်တွေ နည်းအမျိုးမျိုးနဲ့ ဒိန်းမတ်ဝင် ပြိး ကာတွန်းဆရာကို သတ်ဘို့ကြံနေကြတယ်ဆိုတော့.. သူ့ကို ၂၄ နာရီ အစောင့်နဲ့ ထားထားရတယ်လေ.. အခုတစ်လော ကုလားမလေးအကြောင်း ဖေါင်နေအောင် ဖွဲ့ နွဲ့ ထားတဲ့ ဆောင်းပါးတွေ ဗီဒီယို တွေတင်တော့ ဧရာဝတီ ကို စောက်မြင်ကတ်ပြီး ရပ်လိုက်တာပါဘဲ.. မထူးဆန်းပါဘူး.. ဒီကုလားမ လဒ်ပုတ်တယ်.. သူ့အကြောင်းစာဖွဲ့ ရင် လဒ်ပိတ်တယ်လို့တောင် ပြောရမလိုဖြစ်နေပြီ...
gawtama yae. 1 pyae. tway ka tot..
saut tin pyaw..a pote cha..a sae than..saunt blog yay pee saut lote ma shi saut lote shar..thu myar 1 kar ko ma nar lo phyit..kalar ko lae sae' ...tayote lae ma chan..
wine sae ya mae so lar htar..pae'
အေးလေကွာ။ တရုတ်ကို မြန်မာနာမည်နဲ့ မြန်မာစကားကို အသုံးပြုပြီးဆဲတော့ . . မြန်မာလို့ပဲထင်ကြမှာပေါ့။ အဲဒီ တရုတ်ဆဲတဲ့ထဲမှာ အသားမဲမဲ.. ကျက်သရေတုံးတုံး ကုလား ဘယ်နှစ်ကောင်ဟာ မြန်မာဟန်ဆောင်ပြီး တရုတ်ကို ဆဲနေတာ ဘယ်နှစ်ယောက်ရှိလဲဆိုတာ. . မင်းပဲ သိမှာပါကွာ။ ၀ါးဟားဟား
အိန္ဒိယကုလားကို ဘိုထင်ပြီး ယူလိုက်တဲ့မြန်မာမနဲ့၊ အာရပ်ကုလားကို ဘိုနဲ့မှားပြီး ပုံအပ်ပြီးမှ၊ အာရပ်ကုလားအပြေး၊ မြန်မာလောကမှာ နာမည်ပွလို့၊ နှပ်ပြီးပြေးတဲ့ ဘိုတုကို စိတ်မနာဘဲ နာမည်ပွသွားလို့ မြန်မာဆိုစိတ်နာတဲ့ မြန်မာမတွေတွေ့နေရတယ်။
hote tae hote tae...
nin pae phyit mae..
bo tat loe. myuu tar lay...ngar kyar lite tae..hehe..
nin ka zaw myoe ko ma kyite pae bo thwar kyite tar koe:
khan pot kg ma yae.
bamar so sate ma nar par nae. ho kg taw thar zaw myo ka ya ma lar loe. sint lee khway mhyaw tha lo mhyaw nay tae..
adi mhar pae khan lite tot..
ngar toe. tot nint ko yoon tae...ngar toe. ko tot sate kuu htae ma htae. nae.
kyo pyaw htar tar...nin ka kalar soayan sate win sarr loe.
hote yin pyan pyaw..
mhan yin phin khan..dar pae'